ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: April 2009
ကျွန်မရဲ့ ဒီပို့စ်လေးက ဖတ်သူတွေအဖို့ မင်္ဂလာတစ်ပါးမဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ နာရေးအကြောင်းလေးဖြစ်နေလို့ပါ …. ဘာရယ်မဟုတ် ကျွန်မရေးချင်စိတ်လေးပေါ်လာလို့ ရေးမိပါတယ် … ဖတ်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို တင်ကြိုတောင်းပန်ပါတယ်နော …
နှစ်သစ်မှာပဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ မောင်လေးနာရေးနဲ့စတိုးခဲ့တယ် … ဆုံးသွားတာက သင်္ကြန်အတက်နေ့က …....
သင်္ဂြိုလ်တာက ဒီနေ့ပေါ့ ….ဒီနေ့တနေကုန် ကတ်စကပ် နဲ့ မန်ဒိုင်းမှာ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ် … ခန္ဓာကိုယ်ကို ရန်ကုန်ပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ပေမယ့် နှစ်မကူးခင်ဆုံးပြီး နှစ်ကူးပြီးချိန်မှာပို့မှာမို့ မြန်မာပြည်ဘက်က လက်မခံပါဘူးတဲ့ … ဒီတော့ ဒီမှာပဲ သင်္ဂြိုလ်ဖို့စီစဉ်ရပါတယ် … ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဆုံးပြီး စနစ်တကျ လူလိုသူလို နာရေးလေးဖြစ်မြောက်သွားတာတော့ ကျွန်မ၀မ်းသာမိပါတယ် …
သူတို့အလုပ်က လိုက်ပို့သူတွေ Shuttle Bus လေးစင်းစာရှိပါတယ် … တစ်ယောက်တစ်လက်နဲ့ ၀ိုင်းကူညီလိုက်ကြတာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းဘာမှတောင်သိပ်လုပ်လိုက်စရာမလိုခဲ့ပါဘူး ….
သူ စင်္ကာပူရောက်တာ ၆ လကျော်လေးပဲရှိပါသေးတယ် … သူ့အစ်မ (ကျွန်မသူငယ်ချင်း) က ကျွန်မနဲ့တစ်အိမ်တည်းနေသူပါ … သူမဆုံးခင် သုံးရက်လောက်အလိုက ကျွန်မတို့အိမ်ကိုလာပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်နေပါသေးတယ် …. ပထမ လေဖြတ်သွားလို့တဲ့ ဆေးရုံမှာတင်လိုက်ရတယ်လို့ ဖုန်းဝင်ပြီး မကြာခင်မှာတင် ဆုံးသွားပြီးဆိုတဲ့ဖုန်းဝင်လာတာပါ … နောက်ရင်ခွဲစစ်ပြီးတော့ သိရတာကတော့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတာတဲ့ … ကျွန်မစိတ်ထဲ “အိုး….. မြန်လိုက်တာ ...အသက်မှ ၂၇၊ ၂၈ လေးရှိသေးတယ်” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ..…
ပြီးတော့ ဖြက်ကနဲ ကျွန်မမေ့နေတဲ့အရာလေးကို သတိရသွားပါတယ် … လူတိုင်း တစ်နေ့သေရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သိကြပြီးသားပါ … ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့အဝေးကြီးလိုပဲ စိတ်ထဲသိပ်မထားတတ်ကြပါဘူး … ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလဲ လုပ်မထားတတ်ကြပါဘူး … ကျွန်မရော … ကျွန်မသေရင်ပါသွားမယ့်အရာတွေ ဘာတွေ ဘယ်လောက်ထိလုပ်ထားသလဲလို့ ပြန်ဆန်းစစ်မိပါတယ် …. ခေါင်းထဲမှာလဲ ကဗျာလေးတစ်ပိုင်းတစ်စပေါ်လာမိပါတယ် …
ငါသည် မုချသေရမည် …
အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ပါမည် …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:17 AM 13 comments Links to this post
မနက်ဖြန်ကျွန်မအလုပ်ဆင်းရမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ …. နောက်ထပ်အလုပ်သစ်တစ်ခုကလဲ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး … ဆက်နေဖို့ရာလဲမသေချာဘူး …. ဘာမှလဲရေရေရာရာမရှိဘူး .. ဒါပေမယ့်သေချာတာတစ်ခုကတော့ မနက်ဖြန်ကျရင် နေရာဟောင်းကို ကျွန်မလက်ပြနှုတ်ဆက်ရမယ် ….
အဲ့ဒီနေရာဟောင်းလေးမှာ ရန်ကုန်မှာကတည်းက (၅)နှစ်မက လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းအချို့ရှိတယ် ..
ကျွန်မတရားစခန်းဝင်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိတယ် …
ကျွန်မရဲ့ဒေါသတွေပြေလျော့သွားအောင် လုပ်ပေးဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းရှိတယ် …
ကျွန်မစိတ်ညစ်လို့တိုင်ပင်တိုင်း အကြံကောင်းပေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် …
ကျွန်မကို စာနာ နားလည်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် …
ကျွန်မရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် …
ကျွန်မလဲကျတိုင်း ထူမတ်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် ….
နေရာဟောင်းလေးကို နှုတ်မဆက်ချင်ပေမယ့်လည်း သေချာတာတစ်ခုကတော့ နှုတ်ဆက်ရတော့မယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:03 PM 19 comments Links to this post
ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မပြစ်မတင်သာဘူးလေ …
တခါတလေ ဓါးလွတ်ကိုလဲမြေမှာထောက်မိတာပေါ့ ….
လျှောက်လက်စ ခြေလှမ်းတွေကတော့ရွေ့မြဲ ရွေ့ဆဲ ……
မှတ်ချက်။ ။ပုံလေးကို ဒီက (http://www.urban75.org)ယူပါတယ် ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 12:23 AM9comments Links to this post